EMERGENCE MADAGASCAR : Mitera-bokatsoa haingana ny IEM mitaha amin’ny MAP2
Tsy vao izao no niresaka izany fisandratan’i Madagasikara izany ny “Emergence Madagascar” tarihin-dRaboana Holijaona fa efa an-taonany maro. 3 décembre 2018
Naneho ny heviny momba ny safidy tsara tokony hatao amin’ny 19 desambra izao ity mpanao politika sady mpahay toekarena ity.
Tonga ny fotoana iandrandran’ny Malagasy tsy vakivolo ny tena tetika mazava hoentina hampandrosoana ny firenena avy amin’ireo kandidà hiatrika ny fihodinana faharoa, koa miantso ny rehetra, indrindra ireo mbola misalasala, handinika sy hamakafaka ny tena fonosin’ny fandaharan’asa IEM sy MAP2 izahay ato amin’ny Emergence de Madagascar satria izay no antsoina hoe tombontsoa ambonin’ny firenena.
Tokony hisy ny fampitahana ireo fandaharan’asa roa ireo. Rehefa namakafaka ny tetika novolavolain’ny IEM sy ny MAP2 izahay dia ireto ny hevi-dehibe mahasamy hafa azy ireo, izay niala ihany koa tamin’ireo izay nambaran’ny kandidà roa mpifaninana.
Ny vina IEM dia Mada-gasikara « émergent » ao anatin’ny dimy taona, ny MAP 2 kosa dia Madagasikara « naturellement ». Ny IEM izay mametraka mazava ny fampandrosoana haingana, ao anatin’ny fanomezan-danja sy ny fametrahana tombony azo tsinjaraina mankeny amin’ny vahoaka, amin’ izay harena ananan’i Madagasikara na ankibon’ny tany na andranomasina mba hamafana haingana ny trosa sy hanafoanana ny fiankinan-doha.
Ampahany amin’ny fampitahana ihany ireo fa « Rehefa nandinika sy nanadihady ny « Emergence de Madagascar » dia manambara fa tokony hifandona ireo hevitra roa samy hafa ireo,mba hahafahan’ny vahoaka mifidy malalaka izay tena hahasoa sy hampiakatra ny fari-piainana ny hevitry ny IEM na ny MAP 2. Koa miantso ireo Malagasy rehetra, indrindra ireo mbola tsy nandatsa-bato mba hisafidy mazava izay tena fandaharan’asa hitany mahasoa ny firenena sy hampiakatra ny fari-pianan’ny Malagasy iray manontolo.
Miantso ihany koa ireo mpitarika politika sy ny mpanaraka azy mba hanabe ireo mpikatroka ao aminy, ahafahana mametraka ady hevitra miompana any amin’ireo fandaharan’asa, hiakaran’ny lentan’ny ady hevitra mandritra ny fampihelezan-kevitra, hialàna amin’ny fifampihantsiana tsy mitondra voka-tsoa akory ho an’ny firenena. Izany rehetra izany dia natao mba ho amin’ny tombontsoam-pirenena irery ihany sy hanavotana an’i Madagasikara mba ho reharehan’ireo taranaka fara aman-dimby”.
Koa satria ny manoro lalana marina manome aina, tsy nisalasala ny Emergence Madagascar tarihin-dRaboana Holijaona nilaza fa tsara lavitra noho ny Map 2 ny Iem ary iantsoany ny Malagasy tia tanindrazana, liam-pandrosona rehetra ny fanohanana ny laharana faha-13.